lundi, 09 septembre 2019 00:20
Mpanao gazety zokiolona: Nodimandry i Gabhy Rabesahala
Mpilaza vaovao voalohany tao amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) i Gabriel Rabesahala fantatry ny maro tamin’ny anarana hoe Gabhy Rabesahala, 53 taona lasa izay, faha Philibert Tsiranana.
Nitana andraiki-panjana tamin’ny ministera sy andrimpanjakana ihany koa izy fahavelony.Efa Talen’ny TVM ihany koa i Gabhy Rabesahala. Anadahin’i Gisèle Rabesahala izy.
Nodimandry ny alahady 08 septambre 2019 izy.
lundi, 09 septembre 2019 00:14
Fanadinana BEPC: 328 200 ny mpiadina manerana ny Nosy
Hanomboka ny alatsinainy 9 septambra 2019 ny adina an-tsoratra amin’ny fanadinana BEPC sy ny fifaninanana hidirana taona faha-10.
Maherin’ny 328 200 ny isan’ny mpiadina voasoratra anarana manerana ny Nosy, hiatrika io fanadinana ara-panjakana faharoa amin’ny fanabeazam-pirenena io. Hitsinjara amin’ny foibem-panadinana miisa 1 034 izy ireo. Manana fahasembanana (kilemaina, jamba na koa moana marenina) ny 25 amin’ireo kandida.
Hitohy hatramin’ny 12 septambra 2019 ny adina an-tsoratra.
dimanche, 08 septembre 2019 23:57
Papa Fransoa – Mompera Pedro: Nafana ny fifankahitana indray teto amin’ny Akamasoa
Samy nianatra tao amin’ny fakioltean’ny teôlôjian’ny Zezoita tao Buenos Aires, renivohitr’i Arzantina, i Papa Fransoa sy Mompera Pedro. Mpampiatra itsy voalohany, mpianatra ny faharoa.
Nilamina tamin’ny ankapobeny ny fitsidihana Apostolika nataon’i Papa Fransoa teto Madagasikara. Teo amin’ny fiahiana ara-pasalamana ireo mpizaika avy amin’ny lafy valon’ny Nosy dia mpitsabo sy mpirotsaka an-tsitrapo 700 mahery no nahetsiky ny ministeran’ny fahasalam-bahoaka.
Ankoatra ny teny Soamandrakizay dia nisy hatrany ireo niandry raharaha tamin’ireo hopitaly teo an-drenivohitra sy ireo tobim-pahasalamana teny manodidina toa ny CSB2 Alarobia, Ambohimanarina …
(Jereo Tohiny Sary Lamesa Soamandrakizay)
dimanche, 08 septembre 2019 23:12
Soamandrakizay: Nandray andraikitra ny Polisy nanangona ireo ankizy very
Zaza telo, tafasaraka tamin’ny havany nandritra ny lamesa lehibe notarihin’i Papa Fransoa teny Soamandrakizay, no nangonin’ny Polisy.
Naterin'ny Polisy eny amin-dry masera Capucine ny Amorondria – Sabotsy Namena izy telo mianadahy ireo miandry ny ray aman-dreniny, dia zazavavy kely, 9 taona, avy any Ambohidroa Morarano Chrome sy Bryan, zanak'i Angeline sy Solofo, avy eny Ambatolampy Ambohibao Antananarivo, ary zazavavy kely 14 taona, zanak'i Nadia, avy eny Ambohijanaka – Antananarivo Atsimondrano.
Nanaiky an-tsitrapo nandray an’ireo zaza very ireo ry masera Capucine Amorondria, mandram-piandry ny ray aman-drenin’ireo zaza ireo haka azy eny an-toerana.
dimanche, 08 septembre 2019 23:07
dimanche, 08 septembre 2019 23:04
Fanadinana BEPC: 19 756 ny isan’ny mpiadina aty SAVA
Miisa 19 756 ny isan’ny mpiadina BEPC voasoratra anarana aty amin’ny DREN SAVA, mitsinjara ho 7 053 ato Sambava, 4 357 ao Andapa, 4 266 ho an’i Vohémar ary 4 080 ny an’Antalaha.
dimanche, 08 septembre 2019 22:59
Angletera: Minisitra roa nametra-pialana
Mandalo fotoan-tsarotra ny fitondran’ny praimisitra Boris Johnson, taorian’ny fikasan’ity farany hiala an-jolofo ao amin’ny Vondrona Eoropeana tsy misy fifanarahana. Minisitra roa sahady izao nametra-pialana sady niala tsy mpikambana ao amin’ny antoko « Conservateur » tamin’ity herinandro ity.
Teo i Joseph Edmund Johnson na Jo Johnson, izay zandriny lahy, minisi-panjakana misahana ny raharaha, angovo sy ny stratejia, narahin’ny fametraham-pialan’i Amber Rudd, minisitry ny asa sy ny fisotroan-dronono.
dimanche, 08 septembre 2019 22:56
Toamasina: Mbola mangina ny OVEC
Hatramin’ny androany, tsy mbola nisy nametraka antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Ben’ny tanàna teny amin’ny OVEC Toamasina I.
Raha ny omaly, dia Kaominina miisa 27 amin’ny 1695 no mbola nisy nametraka antontan-taratasy firotsahan-kofidiana ho Ben’ny tanàna manerana ny nosy.